Sidee lagu helaa, halkee se laga helaa FARXADDA? (Qiso qiime badan). | Hadalsame Media
Home Ku Biiri Aqoontaada Sidee lagu helaa, halkee se laga helaa FARXADDA? (Qiso qiime badan).
Sidee lagu helaa, halkee se laga helaa FARXADDA? (Qiso qiime badan).
(Hadalsame) 30 Okt 2019 – Nin Praffasoor ah ayaa wuxuu siminaar u qabtay 50 macallin. Isagoo khudbadii wada ayuu inta aamusay wuxuu si degdeg ah macallimiintii ugu qaybiyay 50 buufin.
Wuxuu ku amray in ay buufiyaan oo nin walbaahina buufinka uu haysto uu magaciisa kula qoro far la arki karo. Kaddibna inta buufinnadii oo dhan ka aruuriyay ayuu qol ku soo xiray. Macallimiintii ayuu u soo jeestay, wuxuuna ku yiri ” hadda baxa oo nin walbaahi ha ii keeno buufinkii magaciisu ku qornaa.”
Macallimiintii way kala ordeen, wayna isgarbiyeen oo albaabkii qolka isku ciriiriyeen.
Muddo shan daqiiqo ah markii ay iska daba wareegayeen ayaga oo uusan midkoodna helin buufinkiisii ayuu macallinkii u yeeray. Wuxuu ku yiri ” nin walba ha soo qaato buufinkii uu ka gaaro, hana siiyo magaca ku qoran qofka iska leh.” Sidii bay yeeleen, hal daqiiqo ayayna arrintii ku dhamaatay.
Wuxuu praffasoorkii yiri ” Buufinnadu waxay ka dhiganyihiin farxadda aan raadinayno. Markii aan farxaddeena oo keliya raadsanno way nagu adkaanaysaa in aan helno, balse markii aan dadka kale farxad siinno iyagana farxad kale ayay na siinayaan. Sidaas darteed; dadka kale farxad sii, si adigana aad u heshid farxaddaada.
Waa halkii abwaan Barre Maxamed Fiidoow ka yiri:
Anshax suuban waa inuu noqdaa nolosha aas aasku.
Waxaad adigu jeceshahay u quur kuwa asaaggaa ah.
Previous articleGOOGOOSKA: Brescia vs Inter Milan 1-2, FC Barcelona vs Real Valladolid 5-1 (Inter oo hoggaanka sii qabatay)
Next articlemacallinka xulka Senegal oo ka sheekeeyay qiso muujinaysa inay Afrika weli niyadda ka ADDOONSAN tahay!! (Qiso dhab ah)